Train Atụmatụ Na Hacks N'ihi Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Train Atụmatụ Na Hacks N'ihi Europe
Train Atụmatụ maka njem na Europe dị oké mkpa maka njem. Firstly, e nwere ọtụtụ dị iche iche ihe na-ejegharị na Europe. I nwere ike ịhụ mara mma àkwà mmiri, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ma ohiha breathtaking mma. Ma ọ bụ ikekwe ị na-ejegharị ejegharị na-ahụ ịtụnanya omenala Italy. N'akụkụ aka nke ọzọ, ị nwere ike ejegharị ejegharị maka azụmahịa. Ma ọ bụ ihe niile dị n'elu ma na-eme ma azụmahịa ma njem na-atọ ụtọ – Mgbe ihe mere na-ejegharị ejegharị bụ mgbe niile dị iche iche mkpa nke Atụmatụ na hacks maka njem anọgide otu.
Independent njem na Europe.
Best Train Atụmatụ & Hacks maka njem Europe ụgbọ okporo ígwè
Firstly, emela ihe rookie ndudue njem nke ịnwa ịhụ ihe niile na Europe n'otu njem. E wezụga eziokwu na Europe bụ oke ibu na-ahụ na onye njem, obodo na Europe na-oke buru ibu na-ahụ na onye njem. n'ezie, ọ dị mma ịhọrọ a na-elekwasị anya maka gị na njem na-arapara n'ahụ ya. Ke edinam na nke a bụ gị njem mbụ na Europe, ị kwesịrị ị na-atụle ndị bi dị ka France, Italy, Spain, na Germany.
Atụmatụ na-akwụkwọ n'ihu
Ndụmọdụ ụgbọ oloko maka ịdebe akwụkwọ n'ihu bụ na ọ bụghị naanị ịchekwa tiketi tupu oge enyere gị aka ịhazi ego, ọ nwekwara ike nyere aka mee ka nkwa idobe oche maka njem gị niile.. Na ìhè nke n'oge ntinye akwụkwọ tiketi ịbụ nke kacha uru, anyị nwere ike ikwu-egbu osisi na akwụkwọ tiketi ka anya dị ka ha na-aghọ dị (2-3 ọnwa ole na ole tupu njem ahụ). Ọzọkwa, na -eme atụmatụ gị njem anya-oge nwere ike hụ na ị zere igwe mmadụ ma nweta ọnụ ahịa ka mma. Ghara ikwu, na ịkwado n'oge pụrụ inyere gị aka izere nnukwu ìgwè mmadụ na nnukwu queues. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị akwụkwọ na-aga njem nleta hotspots n'oge elu oge ugboro ka July / August, o yikarịrị ka ị ga-ezute ndị obodo ma yikarịrị ka ndị njem nleta ga-agba gị gburugburu. Yabụ ọ bụ ezie na ịnwere ike ịhụ ọhụụ niile n'oge a, ị ga-atụfu ezigbo ahụmịhe. Na ihe omume ị na-eme dị ka di na nwunye n’otu otu inwere ike ikwado ọnụego egosighi maka njem gi. Ma, cheta na ndị a ego ga naanị-nti ma ọ bụrụ na ị na-anọ ọnụ dị ka a di na nwunye / otu maka dum oge nke njem.
Ndụmọdụ ụgbọ oloko mbụ maka akwụkwọ njem bụ nke ahụ: mba na Europe agbasaghị nwere nkwekọrịta n'etiti ha na-enye ohere njem na-aga gafee ókè-ala-enweghị na-egosi njem akwụkwọ. Mba European Union, ọ kachasị, ekwe njem na-ahapụ na-abanye na-enweghị na-egosi akwụkwọ ikike ngafe. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile European Union na mba na-ekere òkè nke a na-emeghe ókè iwu dị ka Croatia, Bulgaria, na Romania. Na ntule ndịiche, enwere mba ndị na esoghi na European Union na esonye na nkwekọrịta ahụ dika Switzerland na Norway.
Jiri ụgbọ oloko gị Atụmatụ na anyị magburu onwe tiketi ahịa
Save A Train chọrọ ka ịzọpụta gị dị ka ukwuu ego dị ka o kwere. Ya mere, igwe nyocha anyị na - achọpụta gị tiketi dị ọnụ ala. Chọgharịa anyị Save A Train saịtị ugbu a ma were 3 nkeji chọta gị ọzọ gbaa ụgbọ okporo ígwè. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ iji E Si Nweta Kaadị, na 10 ọzọ nhọrọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-tips-hacks%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị nwere a website, ị nwere ike jikọọ anyị RSS ndepụta.
#traveleurope europetravel Atụmatụ ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel